Axmed Madoobe oo sababeeyay qabsoomid la'aanta Shirkii ay u yimaadeen - Jowhar Somali news Leader
Home News Axmed Madoobe oo sababeeyay qabsoomid la’aanta Shirkii ay u yimaadeen
Axmed Madoobe oo sababeeyay qabsoomid la’aanta Shirkii ay u yimaadeen
Iyadoo aanay weli si rasmi ah u furmin Shirkii u dhaxeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa waxaa soo baxayay hadal heyno kala duwan oo ku aadanaa in Puntland iyo Jubbaland ay shuruud ku xireen shirkaas.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ka hadlayay sababta dib u dhaca shirka, waxaana uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in shirkaas ay diideen isaga iyo dhiggiisa Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in haddii shirka dhuusamareeb la yiri dad baa ka maqan in aan loo arkin in saddexda nin ee shireysa inay hal reer yihiin
“Waxaan iri hadii shalay Dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd niman baa ka maqan, in aan hadana anaga oo saddex ah intaan shirno hadhow aad na xamataan oo tiraahdaan aryaa day saddexdii qoyska ahayd baa hada wax shiraysee, masiirka iyaga maa ka talinaaya. Warkaasi war kale waaye, taas inaan shir intaan galno saddexdayadu komunikee soo saarno nooca doorashada ka soo hadallo, warqad kale aan soo saarnaa waxay macno tiraysaa nooca shirku yahay iyo imaatinkayagii iyo waxaba”.
Ugu dambeyn Axmed Madoobe ayaa sheegay inay ma huraan tahay in shirkani noqdo mid ay u dhan yihiin hogaamiyeyaasha dawlad goboleedyada idilkood si hehsiis is ogol ah looga gaaro doorashada Soomaaliya.